SOOMAALIYA: DHAAWACYADA OO KA TAN BADIYEY AWOODDA HAY’ADAHA CAAFIMAADKA - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
SOOMAALIYA: DHAAWACYADA OO KA TAN BADIYEY AWOODDA HAY’ADAHA CAAFIMAADKA
24.09.2010 | Gobolka Banaadir, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Dagaalka ka socda Muqdisho oo wax u dhimaya Awooddii Lagu Daweyn Lahaa Dhaawacyada Tirada Badan
Bukaano lagu dawaynayo cusbitaalka Dayniile ee ku yaalo duleedka Mogadisho, September 23, 2010©MSF
Dagaal xooggan oo 23kii Sebtembar ka dhacay magaalo-madaxda Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa ka tan badiyey cusbitaalka uu taageero Ururka Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn /Médecins Sans Frontières (MSF) oo ay soo gaareen dersinno dad qaba dhaawacyo culus ah, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen carruur iyo haween. Ilaa saaka, 81 qof ayaa la dhigey Cusbitaalka Dayniile ee ku yaalla Muqdisho geeskeeda, iyada oo qaar aad u badan kuwan ka mid ahi ay qabeen dhaawacyo ka soo gaarey qaraxyo. Bukaanno afar ah ayaana dhintey.
Kooxda MSF waxa ay teendho kale oo dheeri ah ka dhiseen daaradda cusbitaalka si loogu qaabilo bukaannada cusub eek u soo qulqulaya. Saddex teento oo kale ayaa hore loo dhisey si loogu qaabilo bukaannada ka bata cusbitaalka 59-ka sariirood leh, kaas oo qaabiley 45 qof oo dagaallada ku soo dhaawacmey maalin keliya oo toddobaadkii hore ka mid ah. Maalintii isniinta oo ay taarikdu ahayd 23-da waxaa cusbitaalka lagu daweynayaa 161 qof.
“Dadka reer Muqdisho ayaa ay dhibta ugu weyn ka soo gaareysaa dagaalka ba’an ee socda waxaana ay shaqaalaheenna caafimaadku ku rafaadsan yihiin sidii ay dhibtaa wax uga qaban lahaayeen,” ayaa uu yiri Thierry Goffeau oo ah Madaxa Ergada MSF. “Rabshahadan ugu dambeeyey, oo sii xoogeysanayey bishii u dambeysey, waxa ay waxa u dhimmayaan kartidii aan u lahayn in aan si ku filan wax uga qabanno baahiyaha caafimaad ee degdegga ah ee dadka.”
Ilaa 23kii Agoosto, kooxaha MSF waxa ay daweeyeen 542 qof oo dagaallada ku soo dhaawacmey, 394 ka mid ahi waxa ay qabeen dhaawacyo ka soo gaarey qaraxyo halka ay148 ka mid ahi qabeen dhaawacyo ka soo gaarey xabad. In ka badan 200 oo qalliin ayaa la sameeyey. Qaar ka mid ah sahayda caafimaadka ayaa Muqdisho ka dhammaadey waxaana MSF ay degdeg ugu dhaqaaqdey in Cusbitaalka Dayniile ay gaarsiiso sahay isugu jirta marka laga bilaabo tuubooyinka dheecaannada iyo dhiigga dhaawacyada looga saaro ilaa go’yaal iyo joodariyeyaal.
“Rag, haween, iyo carruur yaryar ayaa la dhigey cusbitaalka kuwaas oo qaba dhaawacyo aad u xun oo ka soo gaarey qaraxyo,” ayaa uu yiri Goffeau. “Nasiibdarro, iskahorimaadka Muqdisho ma ahan wax cusub, laakiin waa in aan la iloobin saameynta uu ku yeeshey dadka rayidka ah.”
MSF waxa ay mashaariic ka waddaa siddeed gobol oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaalla. Waxaana uga shaqeeya shaqaale ka badan 1,300 oo Soomaali ah, oo ay taageeraan 100 shaqaale kale ah oo jooga Nayroobi, Kenya, si ay u bixiso daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta qaaxada iyo nafaqo-xumada, biyo iyo sahay gargaar oo ay siiso dadka barokacay. MSF wax maaliyad ah oo ay ku fuliso mashaariicdeeda Soomaaliya kama qaadato dowlad, waxaana ay ku tiirsan tahay deeqaha ay siiyaan shakhsiyaadka caadiga ah ee dunida dacalladeeda ku kala nool.
Tags: Banaadir, dagaalo, dayniile, dhaawac, Muqdisho
Qoraalada kale ee ku saabsan Gobolka Banaadir, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF oo soo Gabagabeysey Howlihii Caafimaadka ee Mashruuca Degmada Hodan ka dib Dilkii Shaqaalaheeda
Somalia – MSF waxay hakad gelisay howlgaladeedii deegaanka Madiina muqdisho ka dib markii weerar toos ah lagu qaaday xafiiskeeda
In ka badan 1,500 oo carruur ah ayaa lagu daweeyey tas-hiilaadka caafimaad ee cusub ee ay MSF ka furtey Muqdisho